Tsy fandriampahalemana… ady fiady | NewsMada
Tsy fandriampahalemana… ady fiady
Tena mbola mampikaikaika ny maro amin’izao ny tsy fandriampahalemana, indrindra amin’ny faritra sasany: miaka-bokatra, ohatra. Na amin’ny lalam-pirenena aza, misy ny fandrobana entana. Ady fiady. Tsy lavina, misy ny faharesen-dahatry ny fitondram-panjakana: ny fandriampahalemana no antoky ny fampandrosoana. Izay no anisan’ny nanomezana tombondahiny manokana ny fampanjakana ny fandriampahalemana tamin’ny fanitsiana ny tetibolam-panjakana farany teo.
Tsy lavina ihany koa, tena misy ny ezaka amin’izay fampanjakana ny fandriampahalemana izay? Ne efa mba manomboka mahatsapa sy miaina izany ny vahoaka eny ifotony. Saingy misy ihany ny tena mbola mampikaikaika… Tanàna tsy ilaozan’adala? Nefa na efa somary mihena aza, ohatra, ny trangana asan-jiolahy etsy sy eroa, voalazan’ny tatitra ofisialy fa mahery vaika ny fisehon’ny herisetra amin’izao: fandatsahana aina mivantana, habibiana… Inona loatra no mahatonga izany?
Tsy mianina na mionona amin’ny fandrobana entana na vola ny olon-dratsy, fa tonga amin’ny fanalana aina amin’ny amin’ny alalan’ny habibiana. Ny maty ihany no tsy miteny? Nefa mety eo koa ny karazana lolompo sy valifaty manoloana ny fahazoana na fahafatesan’ireo olon-dratsy raindahiny tamin’ny faritra sasany tato ho ato: fihantsiana tsotra izao… Eo koa ny fampihorohoroana ny vahoaka ifotony fa tsy misy izay fanahiana na fahatahorana mpitandro filaminana, na fitsarana, na fonja…
Tonga amin’ny faratampony ny asan-jiolahy amin’izany herisetra mahery vaika be izany? Na mby amin’ny hoe tsipaky ny aina ka mandrovi-tsihy… Kisendrasendra ve, ohatra, ny hoe dahalo ampolony na anjatony no indray manafika tanàna kely; eny, na amin’ny tanàna kely tsy ampy ny antsasak’izy akory aza ny isan’ny mponina amin’izany. Efa mby amin’ny tsy azo eritreretina sy leferina ny raharaha? Tsy tokony hiraikiraiky amin’izany koa ny mpitandro filaminana mbamin’ny fitondrana.
Mba ho marina sy hiainana amin’izay ny hoe ny olon-dratsy no matahotra vahoaka, fa tsy ny vahoaka no matahotra olon-dratsy?